Mangataka bisy eo anelanelan'i Diyarbakır sy Batman | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra atsimo atsinanan'i Anatolia21 DiyarbakirMangataka bisy eo anelanelan'i Diyarbakır sy Batman
09 / 01 / 2020 21 Diyarbakir, 72 Batman, Railway, Faritra atsimo atsinanan'i Anatolia, ANKAPOBENY, Headline, TORKIA
fangatahana btsden ho an'ny raybus eo anelanelan'i diyarbakir batman
Ny filohan'ny sampana BTS Diyarbakir Nusret Basmaci, Diyarbakir-Batman ho an'ny mpandeha haingana sy azo antoka dia maniry ny hamonjy lalamby.
rehetra izaoAraka ny vaovao avy amin'i Toygar Kaya; "Ny sendikan'ny mpiasan'ny United Nations Workers Union (BTS) Diyarbakır ny Filohan'ny Sampana Nusret Basmacı dia te-handeha amin'ny lalamby ampiasaina amin'ny faritra maro mba hitaterana mpandeha haingana sy azo antoka eo anelanelan'i Diyarbakır sy Batman.
REHEFA ZAVA-DEHIBE NO EFA TAFAKA
Raha ny filazalazana ny fampiasana ny lalamby, hoy i Basmacı, "Ny lalamby no demo na andalana efatra amin'ny sarety Anatolianina. Lamasinina mpandeha izy io izay misy mpandeha roanjato mahery isaky ny fiara, izany hoe akaikin'ny olona an'arivony tsindraindray. Izy io dia ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny tambajotra Rail. Indrindra ao amin'ny faritra Izmir; Aydın, Denizli, Söke line, Eskişehir-Kütahya line ary tonga teo amin'ny Malatya-Elazığ ”hoy izy.
TOROHEVITRA MISY DAHOLO AZY
Nilaza i Basmacı fa i Raybus dia ampiasaina amin'ny toerana misy ny mpandeha avo, hoy i Basmacı fa tokony hampiasaina eo anelanelan'i Diyarbakır sy Batman, izay mitovy toetra, ary nilaza hoe: Batman dia tanàna mitombo izay misy mponina dimy hetsy. Manana fiaran-dalamby roa isika izay mandeha efatra in-droa isan'andro ary miasa eo anelanelan'ny tanàna roa. Ireo fiaran-dalamby ireo dia mahazaka olona 300 isan’andro ary miasa tsy misy vidiny feno. Mandritra izany fotoana izany, ny tsipika lehibe amin'ny South Express dia miasa 5 andro isan-kerinandro. Ireo no lokoka vokarina amin'ny alàlan'ny diesel. Ny tambajotram-tambajotranay dia vita miaraka amin'ny valala feno olona efatra arivo sy roa alina ao amin'ilay sambo. Nanomboka tamin'ny taona 1970 ireo milina ireo no manompo an'ity andrim-panjakana ity. Reraka izy ireo, ny vidin'ny fikojakojana ihany koa. Eto, raha sendra ny sendika voarindra, araky ny fangatahan'ny vahoaka dia tiantsika ampiasaina haingana araka izany ny lalamby any amin'ity faritra be mponina ity. Lasa fitakiana izany fangatahana izany fa tsy fangatahana. Mifanaraka amin'ireo setra ireo ny lalantsika. Zava-dehibe ny ho tonga satria sarotra ny mahita toerana amin'ny fiaran-dalamby, indrindra amin'ny faran'ny herinandro. Ny fahafahan'ny zotram-piarantsika ankehitriny dia olona 300 nefa misy fotoana rehefa mahita 600 isika ».
Basmacı, izay nanome ohatra avy any an-tanàn-dehibe mampiasa railbus dia nilaza hoe: "Raha ohatra, dia 3.5 ora eo amin'ny lalana mankany Ankara mankany Eskişehir, tamin'ity indray mitoraka ity amin'ny 1 ora sy 15 minitra amin'ny lalamby. Ohatra, tsy misy fifandraisan-dàlamby mankany eto Urfa. Vokany, tanàn-dehibe i Urfa ary misy roa tapitrisa dolara. Eskişehir sy Ankara, raha atao eny an-tampon-kavoana no atao eto, ”hoy izy.
Valiny avy amin'ny BTS mankany amin'ny fandefasana faritra iray ao amin'ny Railway Station Ankara
Raybüs nomanina ho an'i Batman-Diyarbakır
Fiofanana momba ny Railbus ho an'ny Machinists amin'ny Batman Diyarbakır Line
Kianja Akşehir Ilgın dia mitaky ny fametrahana bus
Nanambara i Raybüs, filohan'ny federasiona MHP
Batman Governora Şahin Raybus ho 'finiavana politika dia tsy maintsy ilaina »hoy izy
Fanamarihana Tender: Haorina ny sehatra Ladder ho an'ny olona sembana (Malatya…
Barzani, ny lalamby eo Torkia sy Irak Request
Fitakiana amin'ny lalamby ambanin'ny tany ao Diyarbakır
Fanamarihana Tender: Fikojakojana ny biriky eo anelanelan'i Fevzipaşa-Diyarbakır Line Malatya-Diyarbakır…
Manohy manapaka ny varavarankelin'ny fiaran-dalamby ny fiaran-dalamby Batman-Diyarbakir
Filana Mariho: Diyarbakir-Batman lalamby tsipika fanavaozana 40 km lalana fanorenana fitiavana
Fikambanana sendikan'ny sendikà sendikà
Biraon'ny Sampana BTS Diyarbakır
Bus eo anelanelan'i Diyarbakır sy Batman
Diyarbakir Batman Railway Station
Diyarbakır Batman avy amin'ny Train